सातामा नेप्से परिसूचक १०.२७ अंक बढ्यो, कुल बजार पूँजिकरण २० खर्ब माथि
भदौ २७, काठमाडौं । यो साताको कारोबारमा नेप्से परिसूचक १० दशमलव २७ अंक बढेको छ ।
गत साताको अन्तिम कारोबार दिन भदौ १८ गते बिहीवार १ हजार ५१० दशमलव ४२ विन्दुमा रहेको नेप्से परिसूचक यो साताको अन्तिम कारोबार दिन भदौ २५ गते बिहीवार १ हजार ५२० दशमलव ६९ विन्दुमा पुगेको हो । गत साताको अन्तिम कारोबार दिनदेखिनै ओरोला लागेको बजार यो साताको दोस्रो कारोबार दिनसम्म निरन्तर घटेको थियो ।
साताको पहिलो कारोबार दिन १० दशमलव ४५ अंक र दोस्रो कारोबार दिन १२ दशमलव १७ अंकले बजार ओरालो लागेको थियो । तेस्रो कारोबार दिन पनि कारोबारको अन्तिम अवधिमा गएर बजार ७ दशमलव ३५ अंकले बढेर बन्द भएको हो ।
यो साता पाँच कारोबार दिनमा तीन दिन बजार बढेको छ । दुई दिन २२ दशमलव ६२ अंकले बजार घटेको हो भने तीन दिन ३२ दशमलव ८९ अंकले यो साता बजार बढेको हो ।
शेयर बजारको कुल पूँजिकरण यो साताको कारोबारले रू. २० खर्ब २१ अर्ब ७४ करोड ९० लाख पुगेको छ । शेयर बजारले ऐतिहासिक १ हजार ८८१ विन्दु कायम गरेको अवधिकै हाराहारीमा बजारको पूँजिकरण कायम भएको छ ।
नेप्सेले कारोबारमा ऐतिहासिक विन्दु विसं २०७३ साउन १२ गते कायम गरेको थियो । त्यस दिन कुल बजार पूँजीकरण रकम रू. २० खर्ब ५४ अर्ब ५४ करोड ५० लाख थियो । आफ्नो लगानीको मूल्य बढ्दै गएपछि लगानीकर्ताहरु यो क्षेत्रमा लगानी थप गर्न उत्साहित भएको देखिन्छ ।
पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा प्रयाप्त तरलता र सस्तो ब्याजदरका कारण शेयर बजारमा लगानी बढेको बजार विश्लेषकहरुले बताएका छन् । सबै क्षेत्र कोरोना महामारीका कारण अस्तव्यस्त भइरहँदा शेयर बजारलाई पूर्ण प्रविधिमैत्री बनाइ कारोबार सञ्चालन गरिएकाले पनि यो क्षेत्र लगानीको प्रमुख आकर्षण बनेको जानकारहरु बताउँछन् ।
गत साता बजारमा रू. ११ अर्ब ९० करोड २४ लाख ४९ हजारको शेयर कारोबार भएको थियो । यो साता भने कारोबार रकम रू. ३७ करोड ९८ लाख ९ हजारले कम भएको छ । यो साता रू. ११ अर्ब ५२ करोड २६ लाख ४० हजार बराबरको शेयर कारोबार भएको हो ।
यो साता अन्तिम कारोबार दिन नेप्सेको कारोबार व्यवस्थापन प्रणाली (टिएमएस) मा समस्या आउँदा बजार प्रभावित भएको थियो । नेप्सेले प्रभावित अवधि थप गरी बिहीवार साँझ ५ बजेसम्म बजार सञ्चालन गरको थियो । टिएमएसको समस्याका कारण १२ बजेर १९ मिनेटदेखि २ बजेर १५ मिनेटसम्म बजार बन्द भएको थियो ।
यो साता लगानीकर्ताहरु साना कम्पनीहरुको शेयरमा बढी आकर्षित भएका थिए । लगानीकर्ताहरुले अंकित मूल्यभन्दा कम शेयरमूल्य भएका जलविद्युत् क्षेत्रका कम्पनीहरुको शेयर खरीदमा पनि यो साता बढी रूची देखाए ।
नेप्से परिसूचक गत साताको तुलनामा बढेको भए पनि ठूला कम्पनीहरुको कारोबार मापक सेन्सेटिभ इन्डेक्स भने ३ दशमलव ३५ अंक तल झरेको छ । गत साताको अन्तिम दिन ३०४ दशमलव ७३ रहेको सेन्सेटिभ इन्डेक्स यो साता ३०१ दशमलव ३८ विन्दुमा झरेको हो ।
साताको कारोबारमा देखिएको परिवर्तनको अवस्था :
स्रोत: नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)
दोस्रो घण्टामा नेप्से स्थिर, बैंक अफ काठमाण्डूको सर्वाधिक कारोबार (१ बजेको अपडेट) [२०७७ असोज, १५]
साताको अन्तिम कारोबारको दिन पहिलो घण्टामा १३.२९ अंकले बढ्यो नेप्से (१२ बजेको अपडेट) [२०७७ असोज, १५]
१५५०.४३ विन्दुमा नेप्से, करीब २ अर्ब बराबरको शेयर खरीदविक्री[२०७७ असोज, १४]